The Semalt Islamabad Expert: Chii Chinonzi Referrer Spam In Analytics & amp; Nzira Yokudzivisa Sei?
The Semalt Islamabad Expert: Chii Chinonzi Referrer Spam In Analytics & Nzira Yokudzivisa Sei?
Kana ukawana mutsaona usina kutarisirwa uye kutumira spam muGoogle Analytics account, zvinoreva kuti nzvimbo yako yakakundwa ne spammers. Icho chinetso chiri kukura kune webmasters, vatengesi, mablogiki uye vatungamiri vezvemagariro evanhu seferrer spam zvinogona kukuvadza nzvimbo yako yekutarisa uye zvakaoma kusazvidza.
Dzokera kune aya mazano anobatsira kubva kuSohail Sadiq, nyanzvi ye Semalt Digital Services.
Referrer spam inoshandiswa nevashambadziri, spider, uye bots pamwe nechinangwa chokukukwezva kunzvimbo yekutsvaga nzvimbo uye kukukurudzira kutenga zvigadzirwa zvepaIndaneti - retention in long term care. Izvi zvinopararira nzvimbo yako ye analytics stat uye yakakura mumakore achangopfuura. A new referrer spam iyo ichangobva kubudiswa ndiyo link.zhihu.com. Kana iwe ukashanyira URL iyi kana imwe yakafanana, iwe uchadzoserwa kune peji apo spammers vanoda kuti iwe utenge zvigadzirwa zvavo kana kukurudzira zvavanenge vachiita paIndaneti. Kazhinji kacho kunotsvaga spam kune chinangwa chekusimudzira mavairasi uye malware paIndaneti, uye iwe unofanira kungwarira paunoshanyira zvinyorwa zve spam uye uchivashandura paIndaneti. Iva nechokwadi chekuti uzvibvise mubhuku rako reGoogle Analytics.
Unogona kufunga kuti iyo inonzi spam spam inokuvadza nekuti inowedzera mutengesi kune webhusaiti yako, asi iwe hauna kururama..Bots uye spider zvinokonzera rudzi urwu rwemotokari, uye iyo inobata iwe inogamuchira haisi yechokwadi. Zviri pachena, zvichawedzera kuwedzera kwehuwandu uye nguva yakashandiswa pawebsite yako ndeyechipiri yechipiri. Iko mafambiro emhepo haazokubatsiri mhinduro dzakanaka uye achabatana neData Analytics data. Zvichienderana nereferrer spam ibhizha rinotsvaga SEO rakashandiswa uye rinoshandiswa nemakambani asingatenderwi nevatengi vebasa.
Nzira yekudzivirira sei referrer spam?
Unogona kuvhara nyore kutarisa spam kubva pakuratidza mubhuku rako reGoogle Analytics. Nokuda kweizvi, iwe unofanirwa kuumba mafirisi uye usabvisa kushungurudza uye kutsika kwepamusoro. Kuti usabvisa rudzi urwo rwemotokari, enda kuChikamu chekero cheGoogle Analytics account uye chengetedza pane Zvisarudzo. Pano, unofanirwa kusarudza kuwedzera mafirimu sarudzo kuitira kuti wizard inotanga. Nhanho inotevera ndeyokuita zita refaira se darodar.com, link.zhihu.com, kana chimwe chinhu chakadai. Iva nechokwadi chokuti wakabvisa ma URL ese ekureva mazita nehuyu, uye ma URL akawanda anogonawo kuiswa patsva nyore nyore. Sarudza Mutambo Wemafuta sarudzo uye wosarudza mhepo yemushandirapamwe muChikamu cheMafuta.
Pano iwe unofanirawo kuwedzera darodar.com, kana kuti link.zhizhu.com mumashoko eFreeter Pattern kuti uwane zvinhu zvose zvisingabatanidzwi. Zvinobvira kuwedzera ma URL mazhinji kune mafikisi; nokuda kweizvi, iwe haufaniri kureva URL uye unogona kuita ma filters ekutsanangurira pasi rose kana mahara munhoroondo yako yeGoogle Analytics. Nokugadzira zvinyorwa uye kuva kushingaira, zvinoita kuti iwe uvandudze kunyatso nehutano hwehuwandu hweGoogle Analytics. Iwe unogona kuzvidzivirira pachako newebsite yako kubva kumaDodgy uye maIndaneti ane chokwadi uye uchidzivisa tsika dzekutumira spam kusvika pamwero mukuru. Zvose izvi hazvizotori nguva, uye zvigumisiro zvinogara zvakanaka, saka unofanira kuramba uchigadzira mafungidziro matsva kune dzose URL dzinoshungurudza mubhuku rako reGoogle Analytics.